राजनीतिक सहमति जुटे पुस ६ मा निर्वाचन गर्ने सचिवालयको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ४ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि सांसदहरूको ध्यान नयाँ सभामुख चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र सभामुखको नयाँ उम्मेदवार छान्न सकस शुरू भएको छ ।
सभामुख नहुँदा केही संवैधानिक जटिलता देखिएकाले संसद् अधिवेशनको पहिलो ‘बिजनेस’ सभामुख चयन हुने देखिएको छ । सभामुखको हैसियतमा उपसभामुखले सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ ।
संसद् सचिवालयमा कार्यतर एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल परेपछि साढे २ महिनादेखि संसद् सभामुखविहीन छ । महिलामाथि दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए ।
भावी सभामुखको रेसमा ३ जना देखिएका छन्, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रभावशाली सांसद् अग्नि सापकोटा ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुनुपूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागबण्डामा सभामुख माओवादीको भागमा परेको थियो ।
त्यो बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेलाई तथा उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीलाई दिनेगरी भागबण्डा मिलाइएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख एमाले र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादीले लिएका थिए ।
विगतमा आफ्नो भागमा परेकाले सभामुख पाउनुपर्ने पूर्व माओवादी पक्षको अडान छ । मंसिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कोटामा भागबण्डा गरिएको थियो ।
पूर्वएमाले पक्ष भने पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा माओवादी र एमालेकालीन भागबण्डा भनेर पार्टीमा चिरा पार्न नहुने धारणा राख्छन् ।
यसअघि देव गुरुङको समेत चर्चा भएकोमा पूर्व माओवादी खेमामा अहिले सभामुखका लागि अग्नि सापकोटा एकमात्र दाबेदार छन् ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका बहालवाला मन्त्री मोहन बस्नेतलाई पराजित गरेर सापकोटा संसद्‍मा आएका हुन् ।
उनी २०७० र २०६४ सालको चुनावमा पनि विजयी भएका थिए । तर सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार हुने/नहुने भन्ने कुरा नेकपाका दुई अध्यक्षको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष लिने समयमा प्रचण्डले सभामुख पद ‘सेक्रिफाइस’ गरेको चर्चा माओवादी वृत्तमा छ ।
नेम्वाङ ५० महिनापछि फर्केलान् सम्माननीयको कुर्सीमा ?
सभामुखको रूपमा पूर्वएमाले खेमाबाट उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सुवास नेम्वाङको नाम चर्चामा छ । मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने अडान लिइरहेकी छिन् । महराले गरेको अपराधको सजाय आफूलाई दिन लागिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेकी छन् ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संविधानको व्यवस्थाका कारण उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर सभामुख आफैंले सुरक्षित गर्ने नेकपाको रणनीति छ । त्यसका लागि नेकपाले उपसभामुख वामपन्थी गठबन्धनबाट चुनाव लडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख दिने विकल्पमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।
अर्को विकल्पमा सरकारमा सहभागी रहेको समाजवादी पार्टी या सरकारलाई समर्थन गरेमा राजपालाई उपसभामुख दिने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेर महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाउने राजनीतिक गसिप पनि चलिरहेका छन्, तर सभामुख पद अन्य दललाई सुम्पिने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै देखिएका छैनन् ।
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको २६ दिनपछि अर्थात् असोज २९ गते सुवास नेम्वाङले ओनसरी घर्तीलाई सभामुखको कार्यभार सुम्पेका थिए ।
२०६३ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा, अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि बनेको रूपान्तरित अन्तरिम व्यवस्थापिका तथा २०६५ सालमा गठन भएको पहिलो संविधानसभा र २०७० सालको संविधानसभाको कार्यकालको पहिलो २ वर्ष नेम्वाङ सभामुख बनेका थिए ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि बनेको एमाले र माओवादीको भागबण्डामा सभामुख माओवादीको भागमा परेपछि ओनसरी घर्ती सभामुख बनेकी थिइन् ।
नेम्वाङपछि ओनसरीले २ वर्ष र महराले डेढ वर्ष सभामुख चलाए । अहिले फेरि नेम्वाङको चर्चा चलिरहेको छ, नयाँ सभामुखको रूपमा ।
‘उहाँको चाहाना सभामुखमा दोहोरिनेभन्दा पनि शीतल निवासतर्फ हो, परिस्थितिले फेरि सभामुख बन्ने सम्भावना देखिएको छ,’ नेकपाका एक सांसद भन्छन् । सरकार र संसद्को सन्तुलन, प्रतिपक्षी दललाई मिलाएर लैजान सक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने नेकपा नेतृत्वको चाहना छ ।
‘संसद्को गरिमा राख्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने सभामुख अहिलेको आवश्यकता हो,’ ती नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना सभामुखमा नेम्वाङ हुन् भन्ने रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका नेम्वाङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँगै महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेम्वाङ छुट्दैनन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा होस् या संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छलफलहरूमा पनि ओलीले नेम्वाङलाई सहभागी गराउने गरेका छन् ।
पूर्वसभामुख महराले संसद् चलाउँदा गरेका त्रुटिलाई लिएर संसदभित्र ‘संसदीय सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादा’ कायम गर् भनेर नारा लगाउने प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि नेम्वाङको विषयमा लचक बन्ने नेकपाको विश्वास छ । स्वयं नेम्वाङले भने सभामुख बन्ने/नबन्ने भन्ने विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
राजनीतिक सहमति भए पुस ६ गते नै नयाँ सभामुख !
राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गसिकेपछि संसद सचिवालयले आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको छ ।
उपसभामुख या जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सकिने सभिवालयको गृहकार्य छ ।
अधिवेशनको पहिलो दिनमै दोस्रो बैठक राखेर सभामुख निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गर्न सकिने सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
४ गतेको बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको जिम्मा महासचिवलाई दिएमा ५ गते उम्मेदवार मनोनयन र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेगरी कार्यक्रम बन्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुस ६ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने सचिवालयको प्रस्ताव छ ।
अधिवेशन शुरू हुनुपूर्व बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ । अधिवेशन शुरू हुनुअगावै उपसभामुखले राजीनामा दिएमा सभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
२०७४ फागुन २१ गते निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने बैठकको अध्यक्षता पनि ठाकुरले गरेका थिए ।